प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्रीका चार विकल्प, अनुकूल नभए भङ्ग !
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ राजनीति समाचारप्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्रीका चार विकल्प, अनुकूल नभए भङ्ग !
प्रतिपक्षी भन्छन् : प्रदेशसभा तपाईंको बपौती होइन
विराटनगर / प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि चारवटा विकल्प अघि सारेका छन् । चार विकल्पअनुसार बैठक सञ्चालन नभए प्रदेशसभा भङ्ग हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
प्रदेशसभाको सातौँ हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक फागुन ९ गते बस्दै छ । यसअघि २५ माघको बैठकमा अवरोध जनाएको सत्तारुढ दलले चार विकल्पअनुसार अघि नबढे बैठक चल्न नदिने र प्रदेशसभा भङ्ग हुनसक्ने चेतावनी दिएको हो । पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता, दोस्रो सभामुखबाट अविश्वासको प्रस्ताव खारेज, तेस्रो राजनीतिक सहमति र चौथो नेपाली काङ्ग्रेको निर्णय कुर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री राईको छ । तर यो प्रस्ताव नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसद् भङ्ग हुनसक्ने चेतावनी दिए । कोसी अनलाइनसँगको कुराकानीमा उनले संसद् टिक्ने नटिक्ने भन्ने विषय प्रचण्ड–माधव समूहसँग रहेको बताए ।
‘म भङ्ग गर्ने पक्षमा छैन, तर उहाँहरूको (प्रचण्ड–माधव समूह) रबैयाका कारण त्यतातर्फ नपुग्ला भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘संसद् बैठकको आह्वानका लागि सिफारिस मैले गरेको हो, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यसअघि (प्रस्ताव दर्ताअघि) नै विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो नि । तर म विघटनको पक्षमा छैन ।’
मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने ३७ मध्ये १६ जनालाई निलम्बन गरेका छन् । बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने निलम्बनमा परेकालाई प्रवेश गर्न दिन नहुने उनको तर्क छ ।
शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित सभामा पनि उनले विधि प्रक्रियाअनुसार बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘विधिसम्मत ढङ्गबाट आउने जुनसुकै प्रस्तावको सामना गर्न सरकार तयार छ, सरकार भाग्न खोजेको छैन, पन्छिन खोजेको छैन तर हामीले केही वैधानिक प्रश्नहरू उठाएका छौँ,’
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘ती प्रश्न हाम्रा पद र कार्यकालसँग सम्बन्धित छैनन्, संविधान, कानुनबाट निर्देशित दलीय कानुन र दलीय वैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन् । ती विषयमा हामी लचिलो हुन सक्दैनौँ ।’
मुख्यमन्त्री राई अहिलेकै अवस्थामा बैठक सञ्चालन हुन नदिने पक्षमा छन्, ‘हामीले वैधानिक प्रश्न उठाएका हौँ । यसको निरुपण हुनपर्‍यो, या त गल्ती भयो भनेर रियलाइज गर्नुपयो, या त सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्‍यो,’ कोसी अनलाइनसँगको संवादमा उनले भने, ‘या त यसरी अघि बढौँ भनेर एउटा सहमति बन्नपर्‍यो वा काङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्‍पर्‍यो ।’
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ओली समूहले संसद बैठक चल्न दिएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको २५ माघको बैठक सरकारकै अवरोधका कारण ९ फागुनसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । सातौँ हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकअघि चारवटा प्रस्ताव अघि सारेका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा नै भङ्ग हुनसक्ने भन्दै चेतावनी पनि दिएका छन् ।
प्रदेशसभा बपौती होइन
नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विघटनको धम्की नदिन आग्रह गरेका छन् । जनताले पाँच वर्षका लागि प्रदेशसभाका लागि प्रतिनिधि चयन गरेको बताउँदै उनले विघटन गर्ने धम्की नदिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘प्रदेशसभा उहाँको बपौती (बुबाको सम्पत्ति) होइन्,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउन सक्दैनौ भने छाडे हुन्छ । बहुमत पुग्नेले बनाउँछन् ।’ आफू नभए केही हुँदैन भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रचण्ड–माधव समहका नेता इन्द्र आङ्बोले हिम्मत भए संसदको सामना गर्न चुुनौती दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले संसद् भङ्ग हुनसक्ने बताएपछि आङ्बोले संसद् भङ्गको धम्की नदिन र बैठक फेस गर्न चुनौती दिएका हुन् ।